မြို့ငယ်အိမ်များ အတွက် ငှားရန်
1 အိပ်ခန်းများ မြို့ငယ်အိမ် ငှားရန် အတွင်း Yangon
ငှားရန်ရှိသော တိုက်ခန်း (ID-144)
ပိုင်ဆိုင်မှု အိုင်ဒီ: 144
ငှားရန်ရှိသောတိုက်ခန်းမှာ - အိမ်ခန်းအကျယ် ၁၀၀၀ စတုရန်းပေရှိပြီး လသာမြို့နယ်တွင်တည်ရှိပါသည်။ ဟောတိုက်ခန်း ဖြစ်ပါသည်။ ဆူးလေဘုရား၊ မဟာဗန္ဒုလပန်းခြံနှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေးများသို့ ၁၁ မိနစ်အတွင်း လမ်းလျှောက်၍သွားရောက်နိုင်သည့် တိုက်ခန်းဖြစ်ပါသည်။ တိုက်ခန်း၏ တစ်လငှားရမ်းခမှာ - ခြောက်သိန်းခွဲ ဖြစ်ပါသည်။
Listing provided by , တာမွေမြိုနယ်, Tamwe, Tamwe, Yangon. has 1,381 other listings.
စာရင်းသွင်းမည်ကို ကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့် သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ (here must be what we have to agree) ကို သဘောတူသည်။ Legal notice
အကယ်၍ အီးမေးလ်ကို မရရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ဂျန့်ခ်ဖိုဒါကို စစ်ဆေးပါ ပြီးလျှင်/ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ကို [email protected]